Shina CPLA Shina vita amin'ny Plastika tsy misy vita amin'ny plastika azo havaozina 6,5 ​​santimetatra vita amin'ny makiazy Gianty
CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy rano azo havaozina 6,5 ​​santimetatra
Ny CPLA, asidra Poly Lactic Polystact, dia fitambatra PLA (70-80%), kapoakanina (20-30%) ary fampidirina biodegradable hafa. Amin'ny alàlan'ny crystallization an'ny PLA ny vokatra CPLA dia mahatanty ny mari-pana avo hatrany amin'ny 85 ° C tsy misy fihenam-bidy. Raha vao kambana dia tsy mangarahara intsony ny CPLA fa fotsy fotsy volo. Raha nalaina avy amin'ny PLA ny CPLA dia 100% azo biodegradable sy compostable araka ny fenitra EN-13432. Rehefa tapitra ny androm-piainana, ny vokatra mifototra amin'ny PLA dia mety ho voarina na hatsangana amin'ny fotodrafitrasa famokarana indostrialy.
Ny fanamarinana famolavolana PERINDRAZANA OK, tantanana ary fehezin'ny TÜV AUSTRIA. Ity marika ho an'ny vokatra compostable sy fitaovana manta. Fonosana na vokatra manasoka ny marika famonoana INDUSTRIAL OK dia azo antoka fa ho azo alaina ao anaty zavamaniry famatsiana indostrialy.
Item CPLA 6,5 inci Knife
Haben'ny baoritra 34 * 18 * 19cm
Item Toaka fitrandrahana CPLA 6,5
Haben'ny baoritra 21.5 36.5 * * 18.5cm
Item CPLA 6,5 santimetatra
Haben'ny baoritra 41 * 18 * 23.5cm
Previous: CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy rano azo havaozina azo alaina
Manaraka: CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy rano azo havaozina 6 santimetatra